Andro: 5 Febroary 2020
Mihaona ao amin'ny seranam-piaramanidina Istanbul ny mpandraharaha sosialy
Ankoatry ny hoe seranam-piaramanidina, ny seranam-piaramanidina Istanbul, izay natao ho toeram-piainana ara-tsosialy, dia manokatra ny varavarany amin'ireo mpandraharaha sosialy ao anatin'ny sehatry ny «İGA Social Hackathon» (Social Hack). Mpandraharaha sosialy, mpamorona sary, eo anelanelan'ny 20-22 martsa 2020 [More ...]
Ny fifamoivoizana an-tanàna ao Balıkesir dia misambotra amin'ny alàlan'ny fihodinana
Ny kaominina ao amin'ny Balıkesir Metropolitan dia manohy ny fametrahana tetikasa fitaterana hanomezana fitaterana haingana, azo antoka sy tokana ao an-tanàna. Noho ny baikon'ny Ben'ny tanàna Metropolitan Yücel Yılmaz, ny fifamoivoizana an-tanàna [More ...]
Tiana Ankara People Tous Mobile Ticket Application
Ny kaominin'i Ankara Metropolitan, izay manaraka akaiky ny fandrosoana ara-teknolojia sy ny rafitry ny tanàna marani-tsaina dia nanampy vaovao amin'ny andiany fampiharana finday. Ny kaominin'i metropolitan dia manangona mpizahatany eo an-toerana sy vahiny izay tonga aty an-drenivohitra ary any an-drenivohitra. [More ...]
Tohizo ny fiasa amin'ny làlana roa vaovao ao Arifiye
Ny ben'ny tanàna Ekrem Yüce, izay nanazava momba ny asa mitohy amin'ny asa an-dàlana roa izay ho solon'ny fitaterana foiben'ny distrika Arifiye, dia nilaza hoe: “Afaka manohy ny lalana ianao aorian'ny fanamboarana ny orinasa Tank Pallet avy ao amin'ny Terminal Junction sy ny vy. [More ...]
Fifaliana amin'ny Fifanarahana varotra iombonana ao amin'ny Kayseri Transportation Inc.
Kayseri Metropolitan Municipality Transportation Inc. ary fifanarahana fiaraha-miasa iombonana, izay ahitana mpiasa 1150, no nosoniavina tamin'io lanonana io. Niresaka nandritra ny lanonana sonia, ny kaominina Metropolitan [More ...]
Ny mpamily fiara fitateram-bahoaka, izay voarohirohy tamin'ny ady teo amin'ireo mpandeha noho ny 'fihinana sangan'antoka' tamin'ny fiara fitateram-bahoaka tsy miankina iray tao Bursa, dia nesorina tamin'ny adidy. Tao anatin'ilay fanambaràna momba ilay lohahevitra, "Androany any amin'ireo sampam-baovao sy ny fantsona media sosialy manokana [More ...]
Ny minisitry ny indostria sy ny teknolojia Mustafa Varank dia nanasa ny olompirenena ho amin'ny lanonana nasionaly Sky Sky Festival ary nanambara fa handray anjara voalohany amin'ity taona ity ny mpandray anjara iraisampirenena amin'ity taona ity. Ny minisitra Varank, tao amin'ny Twitter, ny 20-23 aogositra tao Antalya Saklıkent [More ...]
Nitombo ny fandaharam-potoan'ny Metrobus
IncreasedBB dia nampiakatra ny isan'ny fiara sy ny dia eny amin'ny zotra metrobus raha oharina amin'ny ririnina farany tamin'ny taon-dasa. Vehivavy 20 eo ho eo amin'ny fahatongavan'izy ireo no tonga tamin'ny biraony nandritra ny ora farany. Ho an'ny fiara fitateram-bahoaka 300 vaovao hanoloana fiara taloha [More ...]
Cengiz İnşaat nanao sonia ny fifanarahana amin'ny asa vaventy vita amin'ny Karawaski ao Slovenia
Cengiz İnşaat dia nanasonia fifanarahana amin'ny tonelina 98,5 tapitrisa euro ho an'ny fananganana ny tsipika faharoa an'ny Tun Tun Karawaski izay hosokafan'i Slovenia eo anelanelan'i Slovenia sy Aotrisy. Cengiz İnşaat, orinasa lehibe Sloveya DARS 3 [More ...]
Atrikasa TCDD Logistics Center
Tao anatin'ny faritanin'ny "TCDD Logistic Efficiency Enproving System Analysis and Business Model Research Project" izay nanatontosa ny fiaraha-miasa amin'ny TCDD General Directorate sy TÜBİTAK TÜSSİDE, "Logistics izay misy ny mpandray anjara amin'ny sehatry ny sehatry ny daholobe, akademika ary tsy miankina. [More ...]